Labo arrimood oo RW Rooble maanta u tago Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ENGLISH
Labo arrimood oo RW Rooble maanta u tago Dhuusamareeb
Inta uu joogo degaannada maamulka ayaa la filayaa inuu kulamo la qaadan doonaa madaxda, Bulshada qaybaheeda kala duwan Iyo Xubnaha Guddiyadda Doorashada Heer Federaal Iyo Heer maamul goboleed ee ku sugan Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Wafti uu hoggaaminayao Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta la filayaa inuu gaaro magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hore u sheegay inuu kormeeri doono goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka kuraasta Golaha Shacabka, wuxuuna socdaalkiisa ka bilaabay Galgaduud oo ku dhawaad 50-kii cisho ee la soo dhaafay ay ka aloosneyd colaad xooggan.
Kadib dardargelinta iyo hubinta goobaha Doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, Rooble ayaa diiradda saari doona xal u raadinta xiisadaha colaadeed ee ka taagan Galgaduud.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen howl-wadeeno ka tirsan xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Rooble, ayaa isku dayi doona inuu wadahadllo la furo hoggaanka koox diimeedka hubeysan ee Ahlu sunna, kuwaas oo ciidamo xooggan ku heysta tuulada Bohol oo qiyaastii 35 km dhanka waqooyi ka xigta Dhuusamareeb.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hore u sheegay hoggaanka Galmudug ay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nabadgalyada, kala danbaynta iyo wadajirka reer Galmudug. Taas oo loo fasirtay in Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha uu damaca hoggaanka ASWJ, ee xukun qori ku doonka ah uu u arko mid sharci darro ah.
Sida ku cad bayaan uu soo saaray 2 October 2021, wuxuu xusay in Mudug iyo Galgaduud, ay ka jirto Dawlad-Goboleed haysata sharciyad buuxda, isla-markaana ay mas'uul ka tahay amniga degaannada Galmudug, lagana dheeraado tallaab kasta oo u muuqata mid lagu carqaladaynayo maamulkaas.
Tan iyo xilligaas ma jirin wax war ah uu ka soo saaray xaaladda Galmudug, taas oo horseedday in si weyn loogu dhaleeceeyo ka gaabsiga mushkiladda ka aloosan degmada ganacsiga ku wanaagsan ee qorrax-dhaca u xigta magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galgaduud.